सेलिब्रिटी एक भ्रम – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ६ श्रावण २०७७, मंगलवार १२:१०
तपाईं सन्चारकर्मीहरु जोसँग कलम छ, किबोर्ड छ, अहिलेको परिस्थितिमा फोकस, स्पटलाइटको व्यक्तिमाथि पार्ने भन्ने निक्र्यौल गर्नुपर्छ । रंगमञ्चमा कुन पात्र महत्वपूर्ण छ, कसले संवाद बोल्दैछ, कसले कथालाई डोहोर्याउँदैछ ? उक्त मूल पात्रलाई नचिनेर तपाईंले कोरस वा फाल्तु पात्रमाथि फोकस वा स्पटलाइट पार्नुभयो भने मुख्य पात्रले सम्प्रेषण गर्ने कुराहरु नसुनिएलान् । संप्रेषण नहोलान् ।
त्यसरी नै समाजमा पनि मिडियाको नजरबाट अलिकति वौद्धिक भनाउँदो मान्छेहरुले बनाएका नजरबाट मान्छेको, समाजको धारणा निर्माण हुन्छ । त्यो धारणा बनाउने तपाईं÷हाम्रो जुन खालको भूमिका, कर्तव्य हो त्यसलाई सार्थक ढंगले लाइट, माइक्रोफोन उचित पात्रहरुलाई दिएमा राम्रो होला । न्याय होला भन्ने लाग्छ ।
समाजले अहिले कलाकारलाई आवश्यक्ताभन्दा बढी महत्व दिएको छ भन्छु म । यसको मनोवैज्ञानिक पाटाहरु छुटै होला, त्यो म त्यति धेरै जान्दिनँ । तर, कला र संस्कृति समाजको एउटा बाइप्रोडक्ट हो भन्ने लाग्छ । सुख, दुःखका गीतहरु, चलचित्रहरु जीवन होइनन् । बरु, तपाईं÷हामीले भोगेका भोगाइहरुका एक अभिव्यक्ति मात्र हो । त्यसैले तपाईं÷हाम्रो आवश्यक्ताको सूचीमा चलचित्र कति नम्बरमा आउला ? आत्ममूल्यांकन गरौं ।
सिनेमामा आदर्शका ठूलै डायलग बोल्ने हामी वास्तविक समाजमा पनि त्यही रुपले प्रस्तुत हुन्छौं ? कि हामी भ्रम र दम्भको आलोकमा उभिएर एकदम फिका नौटंकी जीवन बाँचिरहेका छौं ?
जस्तो उदाहरण । मेरो गाउँमा काइँला मगर भन्ने हुनुहुन्थ्यो । उहाँ कटुवाली प्रथा गरेर आफ्नो परिवार चलाउनुहुन्थ्यो । दुःख, अभावकाबीच सात जना छोरीलाई हुर्काएर, बिहे दान गरेर जानुभयो । उहाँ घर–व्यवहार चलाउनमा मेरोलागि कुनै पिएचडी होल्डरभन्दा कम हुनुहुन्न ।
खासमा सेलिब्रिटी त उही हुनुपर्ने हो, जसले समाजलाई चलायमान बनाइराख्न आफ्नो ऊर्जा, सीप, श्रम निरन्तर रुपमा खर्चिरहेका छन् । जबसम्म उहाँहरुको चर्चा, सम्मान गर्दैनौं, तबसम्म दुई–चार फिल्म खेलेकाहरुको चर्चा भइरहनेछ । सेलिब्रिटी भनेर उनीहरुको नाम लिइनेछ, पत्रिकामा अन्तरवार्ता छापिनेछ, रेडियो, टेलिभिजनमा उनीहरु नै छाउनेछन् ।
एउटा कलाकारले दुई–चार फिल्म खेलेकै भरमा जुन पत्रिकाले उनको सम्पूर्ण जीवन–कथा नै खोजीखोजी उतार्छ, तर जीवनभर खेती–किसानीमा लागेका अनुभव र सीपले माझिएका एउटा किसानको कथा छाप्न कञ्जुस गर्छ ।
एउटा फिल्म बनाउँदैमा, एउटा फिल्म खेल्दैमा संसार नै जिते जसरी, देश नै चलाए झै जसरी मिडियाले उनको जीवन–गाथा लेख्न थाल्छ । भक्ति गान गाउन थाल्छ । सर्वसाधारण पनि उनीहरुकै पछि लाग्छ । किन यस्तो हुन्छ ? म छक्क पर्छु ।
हामी कलाकारहरुको भ्रम के छ भने यो फिल्मका समस्याहरु सल्टाएर समाज नै हामीले धानेका हौं । यो भ्रम किन पनि छ भने, सबैले अनावश्यक महत्व दिएको छ । अनावश्यक चासो र सरोकार राखिएको छ । निजी जीवनबारे खोज्न थाल्छन् । रुचि एवं चाहनाहरु बुझ्न खोज्छन् । अनि त एउटा कलाकारलाई के भ्रम हुन्छ भने, ‘अहो ! म त वास्तवमै महत्वपूर्ण रहेछु ।’
कलाकार भएर हामीले समाजलाई कसरी हेर्छौं ? चलचित्रमा हामी नायकको भूमिकामा हुन्छौं । वास्तविक जीवनमा हामीले त्यो नायकत्व निर्वाह गर्छौ वा गर्दैनौं ? के पनि हुनसक्छ भने पर्दाकै भ्रम पालेर हामी समाजमा हिँड्दा÷बोल्दा पनि त्यसकै अवशेषहरु प्रदर्शन गर्छौं कि ? सिनेमामा आदर्शका ठूलै डायलग बोल्ने हामी वास्तविक समाजमा पनि त्यही रुपले प्रस्तुत हुन्छौं ? कि हामी भ्रम र दम्भको आलोकमा उभिएर एकदम फिका नौटंकी जीवन बाँचिरहेका छौं ?
एउटा शिक्षकले गर्ने मेहनत, एउटा पत्रकारले गर्ने मेहनत, एउटा किसानले गर्ने मेहनत, एउटा चालकले गर्ने मेहनतभन्दा सिनेमाको पर्दामा एउटा नायकले गर्ने मेहनत कहाँ र कसरी माथि होला र ? समाज वा राज्यका लागि किसानको तुलनामा एउटा कलाकारले त्यति अर्थपूर्ण योगदान गरिरहेको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसर्थ सामाजिक योगदानको तराजुमा जोख्दा कलाकारलाई हामीले जति महत्व दिएका छौं, जति चर्चा गरिरहेका छौं, त्यो बढी नै भएको जस्तो लाग्छ मलाई ।
हामीले पनि फिल्म खेलेर घर नै चलाएका हौं । जबकी किसानले खेती कर्म गरेर घर मात्र चलाएको हुँदैन, समाज नै चलाएको हुन्छ । एउटा चालकले, एउटा कर्मचारीले सबैले आ–आफ्नो पेशा÷व्यवसाय गरेर घर नै चलाएका हुन् । यसरी घर–घर चलेर समाज चलेको होला । समाज चलेर देश चलेको होला ।
त्यसैले समाजमा असल योगदान दिनेहरु, कर्म गर्नेहरुको पहिचान गरौं । उनीहरुको कामको मूल्यांकन गरौं । उनीहरुको चर्चा परिचर्चा गरौं । सामाजिक सञ्जाल, संचार माध्यमहरुमा उनीहरुलाई स्थान दिऔं । तब मात्र सार्थक समाजको निर्माण हुनसक्छ । नभए त, भ्रम र भुलभुलैयामा नै हाम्रो समाज कुहिरोको काग झै होला ।
काँग्रेस केन्द्रीय महिला विभागलाई पूर्णता, सचिवमा लक्ष्मी खतिवडा